XDG ichagadziriswa uye tinogona kusarudza nzira yekurodha muTeregiramu | Linux Vakapindwa muropa
KDE ichagadzirisa iyo XDG bug iyo inodzivirira kuchinja iyo Teregiramu yekurodha nzira
Zviitiko zvehupenyu, svondo rino ndanga ndichiongorora zvakaitika kune yangu Teregiramu isina kundibvumidza kusarudza imwe nzira yekurodha. Ini ndaiziva kuti ndainge ndazviita, asi kwete kuti sei kana riini. MuWindows inogona uye ndinoziva kuti mune kumwe kugoverwa kweLinux, senge Ubuntu, futi, asi haina kundisiya chero muManjaro KDE kana Kubuntu. Ndakafunga, "Handisi kushandisa iyo Flatpak vhezheni?" nekuti idzi mhando dzemapakeji dzinozvibata zvakasiyana, asi kwete. Ini ndakapa ruzivo mu GitHub izvo zvinoona kuti kukundikana ndekwe XDG, iyo yakanga isina tariro.
Kufunga zvakati wandei, pamwe ndakazviwana muManjaro pandakashandisa iyo vhezheni xfce-usb, Icho chifananidzo chakaiswa-pamberi uye chakagadzirira kushandiswa pane pendrive. Ndakaisa Plasma kwairi, asi zvirokwazvo ndakaita shanduko kwairi muXFCE, saka zvakanditendera kushandisa imwe dura. Kana pakutanga kwechinyorwa pandakataura zvinoitika zvehupenyu, ndakazviita nekuti nhasi Vakaburitsa katsamba kavanotaura kuti iyi bug yakagadziriswa, saka nzira yekuburitsa Teregiramu inogona kuchinjwa uye, muchidimbu, Sarudza mafolda ekuenda.
XDG inozotibvumidza isu kusarudza mafolda ekuenda
Iko kururamisa kunotsanangurwa se 'Folder kusarudzwa mufaira yekunhonga dialog ikozvino inoshanda kune Flatpak maapplication uye vamwe vachishandisa XDG portals«, Uye ndiro raive dambudziko raive muTeregiramu uye mamwe maapplication: pachinzvimbo chekuti" Sarudza "ichioneka, sezvo Teregiramu yaishandisa XDG portal kushandisa yakasarudzika sisitimu yekushandisa sarudzo, izvo zvatinoona mubhatani iri «Vhura», saka hatigone kusarudza imwe dura.
Mutongo wavepo kweinopfuura gore ikozvino, asi ichagadziriswa paJune 12, zvinoenderana nekuburitswa kweForeworks 5.83, kana kuti saka tinonzwisisa uye tinovimba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » KDE ichagadzirisa iyo XDG bug iyo inodzivirira kuchinja iyo Teregiramu yekurodha nzira
Lakka 3.0 inosvika yakavakirwa paLibreELEC 9.2, inogadziridza, emulators matsva uye nezvimwe
Maitiro ekubvunza nezveLinux uye uwane mhinduro